China Vial Liquid Filling Production Line mpanamboatra sy mpamatsy | IVEN
Tsipika famokarana vovo-tsindrona - Vial SVP
Ny tsipika famokarana ranoka Vial dia misy milina fanasan-damba ultrasonika, milina fanamainana sterilizing RSM, milina famenoana sy fijanonana, milina fametahana KFG / FG. Ity tsipika ity dia afaka miara-miasa ary tsy miankina. Izy io dia afaka mamita ireto asa manaraka ireto amin'ny fanasan-damba, fanamainana sy fanamorana, fanenenana & fanakanana ary fanakanana.
Ho an'ny famokarana tavoara fitaratra.
Izy io dia manana ireto toetra manaraka ireto: vial conveyor vial vidal infeed mitohy; Atombohy amin'ny fanadiovana sy ny fanadiovana ultrasonic hanamafisana ny vokatra fanadiovana. Rafitra fihodinana mitohy. rafitry ny fivezivezena, tavoahangy tazonin'ny tady diamondra tokana.
Fomba fanolorana fomba fanasan-damba: toby fanasana 7 no natokana toy izao:
Fiantsonana NO.1 & No.2: famafazana anaty sy ivelany amin'ny rano mikoriana.
Toeram-piangonana NO.3: fitsofana anaty miaraka amina rivotra voafintina asepisy.
Fiantsonana NO.4: manadio ny atin'ny tavoahangy ny fampiasana WFI. Ao amin'ity gara ity, misy vazaha efatra manasa tavoahangy any ivelany.
Toeram-piantsonana NO.5: Mitsoka anaty miaraka amin'ny rivotra voafintina asepsis.
Toeram-piangonana NO.6: famafazana anaty miaraka amin'ny WFI.
Fiantsonana NO.7: Tsofina indroa ao anaty vata indroa ny rivotra asepisy. Mandritra izany fotoana izany dia misy vazaha efatra mitsoka ny tavoara any ivelany.
Sterilizing & fanamainana
Tunnel sterilization mikoriana no ampiasaina amin'ny lovia fanasana voasasa fanamainana maina sy esorina ny hafanana, mety hahatratra ny maripana avo indrindra 320 ℃, fotoana fandefasana sterilization mahomby mandritra ny 7 minitra. (Ho an'ny fanodinana pyrogen 3Logs）.
Izy io dia manana faritra miasa telo (faritra preheat, faritra fanafanana, faritra fampangatsiahana). Ny faritra miasa telo napetraka eo amin'ny takelaka vy (ny faritra voatsabo amin'ny chrome). Ny takelaka fiarovana dia ampiasaina AISI304 izay efa notsaboina manokana.
Mameno sy mijanona
Aseptic Liquid Filling Machine dia mpameno tavoahangy karazana vaovao novolavolain'ny fandinihana ireo vokatra na an-trano sy any ivelany. Izy io dia manana karazana haitao mandroso isan-karazany amin'ny fototry ny fampidirana sy ny fanalavana, ary azo ampiharina amin'ny tsipika famokarana.
Capping Machine dia mety amin'ny fomba famehezana ny tavoara amin'ny alàlan'ny satroka aluminium. Izy io dia karazana milina mitohy, amin'ny kapila tokana misy tombony haingam-pandeha haingam-pandeha sy ambany ary manintona.
Tombontsoa azo avy amin'ny famokarana ranoka Vial
1.Ny tsipika kely dia mahatsapa ny fifandraisana tokana, ny asa mitohy amin'ny fanasana, fanamorana sy fanamainana, famenoana & fanakanana ary fanakanana. Ny fizotry ny famokarana manontolo dia mahatsapa ny fiasan'ny fanadiovana; miaro ny vokatra amin'ny loto, mahafeno ny fenitra famokarana GMP.
2.Fifehezana servo feno.
3.Ny fonosana fiarovan-tena manazava tena tsara miaraka amina fivoahan'ny rivotra mando, fanaraha-maso ny herinaratra, azo antoka ary mora karakaraina.
4.Ho an'ny fanafody ranon-javatra sy ny famenoana ny fepetra takian'ny mpanjifa, ny rafitra famenoana paompy seramika dia voafantina, izay afaka miantoka tsara ny fahamendrehana famenoana ary azo ovaina.
5.The stoppering endrika mampiditra raha mihodina afaka miantoka mahomby ny fijanonana vokany.
6. Masinina fanidiana: Tsy misy tavoahangy - Tsy misy kapoka, tsy misy mpanakan-dàlana - Tsy misy mikapoka, vovoina mandray fitaovana makirana aliminioma.
Fanitsiana ny milina
Model Andalana famokarana Habeny mety Output (max) Power Lanja afa-karatsaka Haben'ny ankapobeny
BXKZ I CLQ 40 2.25ml 6000-12000 pcs / h 69.8KW 7500Kg 9930 × 2500 × 2340mm
BXKZII CLQ 60 2.25ml 8000-18000 pcs / h 85.8KW 8000Kg 10830 × 2500 × 2340mm
BXKZ III CLQ 80 2.25ml 10000-24000 pcs / h 123.8KW 8100Kg 10830 × 2500 × 2340mm
*** Fanamarihana: Rehefa havaozina tsy tapaka ny vokatra dia mifandraisa aminay raha mila fanamarihana farany. ***
Mpanjifa tena tsara
Previous: Tsipika famokarana Tube Tube Tube
Manaraka: Ampoule mameno ny tsipika famokarana